Iinkqubo zokufudumeza ixesha eliphakathi zokwenza ubushushu, ukuyila okushushu, njl
Ikhaya / Ukunikezelwa kwamandla okuHlaba / Iinkqubo zeMFS zokufudumeza rhoqo
iindidi: Ukunikezelwa kwamandla okuHlaba, Uluhlu lweFree Frequency Series tags: maxesha a phakathi, ukuphindaphinda okuphakathi, frequency eliphakathi ekwenziweni, isifudumezi sangokuphakathi, ukufudumeza kwamaxesha aphakathi, Isixhobo sokufudumeza ngefrikansi ephakathi, umshini wokushisa ojikelezayo, Amandla okufudumala amaxesha aphakathi, Inkqubo yokufudumala yamaxesha amaninzi, Ukuhamba rhoqo kushushu, qha qha qha, ukulungiswa kwangaphambili
Iinkqubo zokufudumeza ixesha eliphakathi kunye namandla okufudumeza
Iinkqubo zokufudumeza ixesha eliphakathi (Uthotho lwe-MFS) zenziwe nge-frequency ye-500Hz, i-10KHz kunye ne-power100, i-1500KW, zisetyenziselwa ukufudumeza okungena ngaphakathi, njengokufudumeza intonga ekubumbeni, ukunyibilika, ukulungela kunye nokulungiselela ukutshiza. Ngenxa yoluhlu olubanzi lwamaxesha, ukoneliseka kokufudumeza kufezekiswa ngokulula kuyilo lokuqwalaselwa kwazo zonke izinto ezinje ngokungena ngaphakathi, ukusebenza ngokufudumeza, ingxolo yokusebenza, amandla ombane wemagnethi njalo njalo.
Kwi-MFS oomatshini abaphakathi bexesha, kusetyenziswa ulwakhiwo lokujikeleza olufanayo. Izixhobo zamandla emodyuli ye-IGBT kunye nesizukulwana sethu sesine sokuguqula ubuchwepheshe beetekhnoloji zisetyenziselwa ukuqinisekisa umgangatho ophezulu kunye nokuthembeka. Ukhuselo olupheleleyo lwamkelwe njengokhuselo lwangoku, ukhuseleko lokusilela kwamanzi, ukhuselo lobushushu ngaphezulu, ukhuseleko lwamandla ombane, ukhuseleko lwesekethe elifutshane kunye nenqanaba lokusilela kukhuseleko. Xa usebenza, ukuphuma kwemveliso, ukuphuma kwamandla, ukuphuma kwesantya kunye namandla okuphuma konke kubonisiwe kwiphaneli yokusebenza ukunceda kuyilo lwekhoyili kunye nokulungelelanisa umatshini.
Ngokwendlela eyahlukileyo yokusetyenziswa, kusetyenziswa izinto ezimbini eziphambili:
(1) ulwakhiwo 1: I-MF generator + i-capacitor + coil
Esi sakhiwo samkelwa rhoqo kusetyenziso oluninzi, njengentonga umatshini wokufudumeza kunye nomatshini wokunyibilika. Olu lwakhiwo lulula, lilahlekile kwaye lusebenza kakuhle ekufudumaleni.
Kolu lwakhiwo, ihlala i-3 ukuya kwi-15 yeemitha ityhubhu yobhedu iyafuneka ukwenza iikhoyili; ombane wekhoyili uphezulu ukuya kuma-550V, kwaye awodwa kwinkqubo yombane, ke ngoko i-coil kufuneka ifakwe i-inshurensi ngokufanelekileyo ukuqinisekisa ukhuseleko lwabasebenza kuyo.
） 2） ulwakhiwo 2: I-MF generator + cap + transformer + coil
Esi sakhiwo sikwasetyenziswa rhoqo, njengokunyibilika kwisithuba, ixesha eliphakathi umatshini wokuqinisa induction kwaye nangokunjalo. Ngoyilo lobungakanani buguquli, imveliso yangoku kunye nevolthi inokulawulwa ukwanelisa umnqweno wokufudumeza ohlukileyo.
Kolu lwakhiwo, iikhoyili ikhuselekile kubaqhubi, ityhubhu yekhoyili inokuveza ngokuthe ngqo ngaphandle kokugquma. Icoil kulula ukuyenza ngokujika nje okumbalwa. Ewe, isiguquli siyakwandisa iindleko kunye nokusetyenziswa komatshini.
imifuziselo Amandla okuphuma akaliwe Rhoqo ubushushu Igalelo langoku igalelo ombane Isekile yomsebenzi Ukuhamba kwamanzi ubunzima Dimension
I-MFS-100 100KW 0.5-10KHz 160A 3phase 380V 50Hz 100% 10-20m³ / h 175KG 800x650x1800mm
I-MFS-160 160KW 0.5-10KHz 250A 10-20m³ / h 180KG I-800x 650 x 1800mm
I-MFS-200 200KW 0.5-10KHz 310A 10-20m³ / h 180KG I-800x 650 x 1800mm
I-MFS-250 250KW 0.5-10KHz 380A 10-20m³ / h 192KG I-800x 650 x 1800mm
I-MFS-300 300KW 0.5-8KHz 460A 25-35m³ / h 198KG I-800x 650 x 1800mm
I-MFS-400 400KW 0.5-8KHz 610A 25-35m³ / h 225KG I-800x 650 x 1800mm
I-MFS-500 500KW 0.5-8KHz 760A 25-35m³ / h 350KG 1500 x 800 x 2000mm
I-MFS-600 600KW 0.5-8KHz 920A 25-35m³ / h 360KG 1500 x 800 x 2000mm
I-MFS-750 750KW 0.5-6KHz 1150A 50-60m³ / h 380KG 1500 x 800 x 2000mm
I-MFS-800 800KW 0.5-6KHz 1300A 50-60m³ / h 390KG 1500 x 800 x 2000mm
Uyilo lwengxelo yevolthi kunye nokwamkelwa kwesekethe ye-LC esekwe kwi-LC.
Itekhnoloji yokuguqula i-IGBT, ukuguqulwa kwamandla okuphezulu ngaphezulu kwe-97.5%.
Ukonga umbane nge-30% ukuya phezulu xa kuthelekiswa netekhnoloji ye-SCR. Kwicandelo lesekethe yesandi, i-coil ye-induction enevolthi ephezulu kunye nekhoyo ngoku, ngenxa yoko ilahleko yamandla iphantsi kakhulu. Itekhnoloji yokutshintsha ethambileyo esetyenzisiweyo emva koko ilahleko ilahleko iphantsi kakhulu.
Inokuqaliswa nge-100% phantsi kwayo nayiphi na imeko.
Izinto ezincinci ezihambelana ngoku kunye namandla aphezulu. Amandla ombane ahlala eshiye u-0.95 apha ngasentla ngexesha lokusebenza komatshini.
Ukulandelwa rhoqo kwetekhnoloji ngokuzenzekelayo kwenza amandla ombane ukuhlala kwinqanaba eliphezulu kuyo yonke inkqubo yokufudumeza.
Ukunyaniseka okuhle, i-IGBT kukucima i-transistor eqinisekisa ukujikajika ngempumelelo kwaye ithatha ukhuseleko kwangoko; IGBT isetyenzisiwe kwinkampani ye-infineon, umenzi owaziwayo kwihlabathi liphela.
Kulula ukusebenza nokugcina, i-IGBT MF i-generator induction kulula ukuyikhusela kunye nokuyigcina ngenxa yesakhiwo sayo esilula sesekethe. Inokhuselo olugqibeleleyo.
Uluhlu lwesithando somlilo, uhlobo oluthile olwenziwe ngokwezifiso ukufudumeza iziko ngokokufuna komthengi.
I-CNC okanye i-PLC ilawulwa ngomatshini ukulungiselela ukuqina kwesicelo.
Inkqubo yokupholisa amanzi.
Isondlo esisebenza ngentonga yomoya.
Elungiselelweyo inkqubo ubushushu oluzenzekelayo yonke.
Hot UKWAKHA / bokwakha workpiece enkulu.
Ukuqina komphezulu kwenxalenye enkulu.
Ukutshiswa kombhobho ukuguqa.
Ukunyibilika kwealuminium yobhedu njalo njalo.
Ukuncipha komkhono weroller.